Diki yekuvhura mvura dundira Manufacturers & Suppliers - China Diki yekuvhura mvura dundira Factory
Cycling Mvura Bag Inotakurika Yepamusoro-mhando
Chigadzirwa chekunze chemitambo chizere neruzivo, nzvimbo dzese dzinoita kuti unzwe kufunga kwayo.Zvishandiso zvine hushamwari kwezvakatipoteredza, kushandiswa kuri nyore, uye zvemhando yepamusoro.Zvese zvirimo zvichakushamisa iwe.Rega ive mubatsiri wako wepamusoro uye mubatsiri wako paunenge uchifamba kunze.
TPU/EVA/PEVA Reservoir Hydration Outdoor Sport
High-performance outdoor sports water bag.Yakakura dhayamita jekiseni remvura port, iri nyore kushandisa.Zvinhu zvakachengeteka uye zvisinganakidze, zvinokupa ruzivo rwakanyanya.Iyo snap-on suction nozzle inovhara yega kana isiri kushandiswa.Iyo suction chubhu inogona kugadzikwa pane hydration backpack, iyo yakanakira kuzadza mvura panguva yekurovedza muviri.
1L/1.5L/2L/2.5L/3L Kunze Kuchengetera Mvura Dundira
Iro bhegi remvura rine kuvhurika kwakafara kuri nyore kuchenesa nekuzadza.Yakagadzirwa nemhando yepamusoro-soro, ine hushamwari kwezvakatipoteredza, isiri-chepfu, isinganhuhwi, uye BPA - yemahara firimu.Zviri nyore kushandisa uye zvakasiyana-siyana.Zvitaera zvakasiyana uye hunyanzvi hunogona kugadzirwa kuti usangane nezvido zvako zvakasiyana.
Camping Hiking Cycling Mvura Yekuchengetedza Bag
Iri ibhegi diki remvura rekuvhura rinoyevedza.Zvakatipoteredza hushamwari pasina BPA zvinhu.Iyo nyowani uye ine fashoni dziva rebhuruu rinokuita iwe anonyanya kupenya munhu mumitambo.Isu tinogona zvakare kukupa iwe akagadziridzwa masevhisi senge zvigadzirwa zvechigadzirwa, masitayipi, mavara, uye marogo.Iva wako wega wezvemitambo yekunze.
Kunze Sport Liquid Bladder
Mudiwa akanakisa wemitambo yekunze.Inotakurika, isingapfeki, yakasimba uye inoshanda.Zvinhu zvepamusoro-soro zvakatipoteredza zvinokutendera kuti uswedere pedyo nezvisikwa uchizvidzivirira.Inoita basa rakanakisa mumitambo yekunze yakadai sekuchovha bhasikoro, kukwira makomo, kumhanya, nekuyambuka-nyika.Rega iwe upe kutamba kwakazara kune simba rako pasina kunetseka.
Yepamusoro-mhando BPA -isina Mvura Bag
Iri ibhegi diki rekuvhura mvura rinoyevedza rine sleeve yekukweva chubhu.Mucherechedzo wemuvara wechiedza chebhuruu uye rima bhuruu rakazara nemafungiro emafashoni.Ehe, isu tinokwanisa zvakare kugadzirisa masitaera, mapatani, uye zvakatemwa zvaunoda zvinoenderana nezvaunoda.Nepo tichivimbisa kutaridzika kwechigadzirwa, isu tinogona zvakare kuvimbisa kunaka kwechigadzirwa.Haina chepfu, haina kuravira, uye haibvisi mvura, saka unogona kuitakura zvakachengeteka.
Kunze Mitambo Yemvura Bag yeCamp Hiking Running
Yakakwirira-yepamusoro yekunze yekudzivirira kwezvakatipoteredza bhegi remvura, BPA - yemahara, isiri-chepfu, isinganhuwi, chikafu-giredhi zvinhu.Iyo bite-valve suction nozzle yakanakira kunwa uye inosunungura maoko.Inokodzera marathon, kuyambuka-nyika, kukwira makomo, uye mimwe mitambo yakawanda.
PVC/EVA/PEVA Outdoor Hydration Bladder
Zvinhu zvakasiyana zvePVC/EVA/PEVA zvinogona kugadzirwa, uye iwe unogona zvakare kugadzirisa masitaera aunoda kana skrini-kudhinda pamusoro kana yakakwira-frequency mapatani aunoda, uye kureba kwepombi yemvura inogonawo kugadzirwa.Gadzira zvigadzirwa zvakakunakira iwe chete.
Kunze Sport Reservoir Hydration Yakakwirira Hunhu
Bhegi remvura rine hunyanzvi hwekugadzira dhizaini.Iyo inoyevedza diki yekuvhura, pombi yekukweva yakashongedzerwa zvakare neinokwevera pombi sleeve, uye inosveta nozzle inogadzirwa nepurasitiki yekuisa chisimbiso tekinoroji.Kwese kuzere neruzivo.
High Quality Kupeta Mvura Bladder Camping Hiking Cycling
Chigadzirwa chekunze chemitambo chakanyatsogadzirirwa kune vekunze vanofarira zvemitambo.Kunyangwe uri kumhanya, kuchovha bhasikoro, kukwira makomo, kana kukwira, inogona kunyatsoshanda newe.Inokubvumira kuchengetedza basa remuviri, enda mberi nechivimbo, usingatyi chero dambudziko.